सुदिपले २००८ मै अमेरिकी ग्रिनकार्ड पाएका थिए । अमेरिकामा पनि जिवन आनन्दकै थियो । तर बाहिरी आनन्दले मानिसलाई हुँदैन रहेछ ।
अमेरिकाको राम्रो यूनिभरसिटिमा पढ्ने चाहना धेरै विद्यार्थीहरूको हुन्छ । त्यसको लागि कोही कोशिश गर्दछन् त ! कोही आफ्नो चाहना मनमै मारिदिन्छन् । तर,सुदिप आचार्यको विदेश पढ्न जाने तयारी निकै रोचक छ ।
कुरा १९९१ तिरको हो । उनी एसएलसी सकेर कक्षा ११ पढ्ने तयारीमा थिए । बुढानिलकण्ठ स्कुलबाट एसएससीमा राम्रो नम्बर लिएर पास गरेका सुदिप एकैपटक दुईवटा कलेजमा भर्ना भए । एउटा कलेजमा साइन्स र अर्कोमा कमर्श पढ्न सुरू गरेका आचार्यले एक महिना एउटा र अर्को महिना अर्को कलेज जाने तालिका बनाएर अध्यायनलाई अगाडि बढाए । साथै उनले ओलेभलको पढाई पनि जारी नै राखे । ११ कक्षा पूरा गरे लगत्तै अमेरिका पढ्न जाने मौका मिल्यो । १२ कक्षा पास नभएका कारण उनले अमेरिकामा हाईस्कुल पढ्नुपर्ने भयो । अमेरिकाको फेड्वल हाइस्कुलमा पढ्नका लागि आबेदन दिएका सुदिपले भिसा पनि सजिलो गरी पाएँ । अमेरिका पुग्दा उनी १६ वर्षका थिए ।
‘बुढानिलकण्ठ स्कुल पढेको ! राम्रो अंग्रेजी बोल्छु,भन्ने घमण्ड म, मा पनि थियो । तर, अमेरिका टेकेसँगै घमण्ड छिनभरमै सिसा जस्तै चक्ना चुर भयो । न, म बोलेको कसैले बुझे ! न मैलेनै बुझेँ ।’ अंग्रेजी काण्ड सुनाउँदै सुदिप दिल खोलेरै हाँसे ! यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, उनले विदेशमा कस्ता–कस्ता अप्ठ्याराहरुसँग जुध्नु परेको थियो ! आफुले भोग्नु परेका पीडालाई निकै रमाईलो गरी सुनाए । सुनाउँदा,जति सजिलो गरी सुनाए, त्यत्तिनै उनका कष्ठपूर्ण भोगाईहरु छचल्किरहेका थिए ।
सटिफिकेट बोकेर फेड्वल हाइस्कुलमा पुगेँका उनलाई प्रिन्सीपलले कस्तो कोर्स पढ्ने,सोचेर आउनुभन्दै सेलेभस हातमा थमाए र अर्को हप्ता आउन सल्लाह दिए । हाइस्कुलको सेलेभसले उनलाई निकै चिन्तित बनायो । पढ्न लायक कुनै विषय थिएन । तनाब भयो ! अब के गर्ने ? आफैलाई प्रश्न गरेँ । उनले भने ‘मलाई सल्लाह दिने बुबा साथ हुनुहुँदैनथ्यो । चाहेको बेला नेपाल फोन गर्न, अहिले जस्तो सहज थिएन ।’
फारमको २५ डलर तिर्नुपर्ने भयो । ‘पैसा कम थियो । २५ डलरको पनि माया लाग्यो । रिसेप्सनमा सोधेँ, ‘भर्ना लिने हो भने मात्र २५ डलर तिर्छु होइन,भने मैले किन तिर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनको कुरा सुनेर भर्ना शाखाको महिला अचम्म परिन । केहीबेर उनको मुखमा हेरिन र भनिन्, ‘तिम्रो सटिफिकेट र फारम दिऊ । तिमिलाई कलेजले लियो भने पैसा दिनु, लिएन भने ठिकै छ, भन्दै सुदिपको कुरामा सहमत भईन ।’
हाईस्कुल पढ्न गएका सुदिप यूनिभरसिटि भर्ना भएँ । तर, ‘फि’ तिर्ने पैसा पुगेन । भर्ना हुँदा, सुरुमै २ हजार डलर बुझाउनु पर्ने भयो । ‘म सँग सात सय २० डलर मात्र थियो । फारममा २५ डलर गयो । घरमा बुबालाई फोन गरेँ । त्योबेला नेपालबाट विदेश पैसा पठाउन गाह्रो थियो । ‘फि’ कसरी बुझाउने फेरि तनाब भयो,’ ‘उनले घटना सुनाउँदै भने ‘मेरो भाग्यनै होला, ‘फि’ बुझाउन लोन पाएँ । त्यो पनि पिचडी गर्दै गरेकी हंङकङको विद्यार्थिबाट । उनीसँग परिचय भएको एकहप्ता मात्र भएको थियो । मेरो इमान्दारीता देखेर होला, उनले मलाई लोन दिईन ।’ ‘फि’ तिर्न लिएको लोन सुदिपले धेरैपछि आफै कमाएर तिरे ।
घरमा हुँदा काम नगरेका उनलाई आत्मनिर्भर भएर पढ्ने कुरा चुनौतिपूर्ण नै थियो । बुबाको कुरा सुनाउँदै भने ‘बुबाले मलाई हिड्ने बेला भन्नुभएको थियो, ‘बाबु मैले नेपालबाट पैसा पठाउने होइन, आफै काम गरेर पढ्नुपर्छ ।’ त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सुरुका दिनमा जे काम भेट्यो त्यही गरेँ ।’
म गर्यो, बिहान सातबजे देखि क्लास गयो । सुत्ने समय तीनदेखि चार घण्टा हुन्थ्यो । शनिवार र आईतवार बिदा हुन्थ्यो । हप्ताभरको थकाउन मेटाउथेँ । सुरुका दुईवर्ष निकै गाह्रो नै भयो ।’
यूनिभरसिटि दुई सेमिस्टर पढेपछि महंगो लाग्यो । त्यसपछि उनी सामुदायिक कलेजमा पढ्न जाने सोचे । शहरदेखि टाढा भएकाले हिडेर जान सकिदैन्थ्यो । सार्वजनिक यातायातको सुविधान थिएन । ट्याक्सी पहिल्यै बुक गर्नु पर्दथ्यो । १९९१ तिरको अमेरिकाको चित्रण गर्दै भने ‘अहिले जस्तो सजिलो थिएन । फोन महंगो थियो । साथीहरुसँग कुराकानी पनि चिठ्ठी मार्फत् आदानप्रदान गर्दथ्यौँ ।’ त्योबेला भोग्नु परेको अप्ठ्यारो सुनाउँदै भने ‘सामुदायिक कलेज पहिलो पटक जाँदै थिएँ । कसरी जाने गाह्रो थियो । एक अमेरिकन परिवारलाई कलेज पुर्याउन आग्रह गरेँ । मलाई सहयोग गरेका ती नागरिकले भने कलेज परिवर्तन गरेर गल्ती गरिस् ।’ अमेरिकन नागरिकको सहयोगमा कलेज त पुगे तर, बस्ने अपाटमेन्ट पाईएन् ।
विगत सम्झँदै भने ‘नेपालबाट ल्याएको सुटकेस बाहेक अरु सामान केही थिएन । छोडेर फर्कने बेला अमेरिकन बुढाबुढीले सुत्न मिल्ने म्याट र आफूहरु गएपछि खोल्न भन्दै एउटा खाम दिए । पछि खाम खोलेको त पाँच सय डलर राखिदिएका रहेछन् । निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा थिए । बस्न खानको कुनै टुंगो थिएन’ । बाध्यताले धेरै कुरा सिकाउने रहेछ । उनी कलेज नजिक बस्ने अन्य देशका विद्यार्थिसँग आफ्नो समस्या राखे । जेनतेन बस्ने बास मिल्यो ।
सुटकेस थन्काएर कामको खोजिमा निस्कीए । त्यहाँ मासु झुण्डाउने काम पाए । ‘अहिले त अलि हट्टाकट्टा छु त्योबेला दुब्बलो थिएँ । कुखुराको तीन चार किलोको मासु झुण्डाउनै गाह्रो । काम छोडिदिए । त्यसपछि घरमा रंग लागाउने काममा लागेँ । घरमा हुँदा खासै नबोल्ने मान्छे त्यहाँ सबैभन्दा धेरै बोल्ने भएँ । नजानेको कुरा अरुलाई सोधि हाल्थेँ ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा कृष्ण आचार्यले गरेका धेरै कामहरु नयाँ छन् । उहाँ नेपालको प्रतिष्ठित व्यावसायिको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । ‘नेपालमा चाउचाउ पहिलो पटक उत्पालन गर्ने बुबा नै हो । म अमेरिका पढ्न जाँदा बुबाले पोखरामा रारा चाउचाउको उद्योग सञ्चालन गर्नु भएको थियो । बुबाको पालामा उत्पादन हुने रारा चाउचाउलाई मानिसहरु अहिले पनि याद गर्दछन् ।’
पैसा कमाउनुभन्दा पनि नयाँ उद्योग वा अन्य ब्यावसायको कन्सेप ल्याउनमा उद्योगी कृष्ण आचार्य अरुभन्दा एक कदम अगाडि देखिनु हुन्छ । उहाँले देशमा भित्र्याउने हरेक काम नयाँ हुन्छ । उद्योगी आचार्यले संचार, उद्योग, कलकारखाना र हाइन्ट्रो पावर जस्तो क्षेत्रमा छुट्टै पहिचना बनाई सक्नु भएको छ । उहाँले ल्याउने हरेक कन्सेप नयाँ र फरक खालको हुन्छ ।
उद्योगी कृष्ण आचार्य छोरा सुदिपको मात्र होइन, ब्यावसायी क्षेत्रमा लागेका धेरैको आइडल नै हुनुहुन्छ । ‘म नेपाल फर्कनुमा बुबाको सबैभन्दा ठूलो हात छ । उहाँले बारम्बार सम्झाउनु हुन्थ्यो,विदेशमा सिकेको सीप मातृभूमि निर्माणमा लगाउनु पर्दछ । देश समृद्ध बने, एक छाक खान र एकसरो लगाउन नेपालीका छोराछोरी खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनु पर्ने छैन । पैसा आउँछ जान्छ । पढाई सकेर फर्क भन्नुभयो । अहिले म जहाँ छु, बुबाकै कारणले छु ।’ इण्डष्ट्रि«यल इन्जिनियरिङको पढाई पुरा गरेर उनी १९९६ मा नेपाल फर्किए ।
नेपाल आएको केही समयपछि अमेरिकाबाटै मेसिन ल्याएर रोटी बनाउने फ्याक्ट्र सञ्चालन गरेँ । यो काम उनले अमेरिकामा तोर्तिया कम्पनिमा सिकेका थिए । काममा उतारचढाव आईरह्यो । चाहे जस्तो बिजनेस हुन, सकेन । ‘रोटी बनाउन अमेरिकाको तोर्तिया कम्पनीमा सिकेको थिएँ । त्यही अनुसार फ्याक्ट्र सुरु गरेँ । केही समयपछि लाग्यो कम्पनि चल्दैन, तर बुबाले भन्नुभयो ‘कस्तो–कस्तो चिज त चल्छ, यो छोड्नु हुँदैन ।’
सायद मेरो उमेरका कारण छिटो आत्तिएको हुन सक्छु भन्ने सोँचे । तर, दुई तीन महिनामै गलत ठाउँमा लगानी भयो भन्ने लागेको थियो । त्यो बेला ठूलै लगानी थियो । नराम्रोसँग रोटी कम्पनी डुब्यो र डुवायो । ऋण तिर्न बुबाले कमाएको जग्गा बेच्नु पर्यो।’ उनी १९९९ मा मास्टर्स पढ्न फेरि अमेरिका फर्किए । यही असफलताले उनलाई सफलताको खुड्किला चढ्न सिकायो । त्यसपछि उनले बिजनेसमा असफलता बेहोर्नु परेको छैन ।
हरेक मानिस आफुलाई अब्बल बनाउन हरतरको मेहनत गर्दछन् । कोही सफल हुन्छन्, कोही असफल । असफलताबाट माथि उठ्ने मानिस अक्सर पछि फर्कनु परेको देखिदैन ।
अनुभव सुनाउँदै भने‘अन्य विजनेसमा भन्दा होम टिभिमा काम गर्न मन लागेको थियो । दुई÷तीन महिनामै थाहा भयो यो प्रोजेक्ट गराउन गाह्रो छ ।’ एउटै प्रकृतिका दुईवटा कम्पनि सुरु भए । एउटा होमटिभि र अर्को डिस नेपाल । पछि दुबै कम्पनी मर्ज भए । त्यसपछि सुदिप कार्यकारी भूमिकामा आए । ‘यो प्रोजेक्ट अमेरिका, भारत, अफ्रिका जस्ता मुलुकमा चलेको छ,नेपालमा पनि चल्छ भन्ने विश्वास मनभित्र थियो,तर परिणाम सोचे जस्तो थिएन । सेटलाइट टेक्नोलोजी नेपालको लागि अन्त्यन्तै सुइटेबल हुन्छ’ उनी भन्छन् ।
लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको प्रोजेक्टलाई कसरी उठाउने चिन्तामा रातदिन महनत गरेका आचार्यले नयाँ जुक्ति निकालले । स्याटलाइट कम्पनीसँग ‘भूइचालो डिस्काउन्ट माग्ने’ । भूइचालो डिस्काउन्टलाई रमाइलो गरी सुनाउँदै भने‘आर्थिक रुपमा ठूलै संकट थियो, भूईंचालो डिस्काउन्टले बचायो । भ्त्त डिस्काउन भनेर दियो ।’
‘सबैभन्दा गाह्रो परम्परागत रुपमा चल्दै आएको केबलबाट मानिसलाई बाहिर ल्याउन, धेरैनै पसिना पुगाउनु पर्यो । भारतमा सरकारले डिजिटल इण्डीया भन्यो, सरकारले जिम्मा लियो । तर नेपालमा ४÷५ महिनामै सरकार बन्ने र ढल्ने गर्दा काम गर्न गाह्रो भयो ।’ ‘राज्यले यसको महत्व अझै राम्रोसँग बुझेको छैन । यसलाई राम्ररी बुझेर काम गर्ने हो भने राज्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ ’सुदिपको भनाईछ ।
मिजासीलो पन र सरल व्यावहारका कारण अमेरिक परिवारको प्रिय बनायो । अप्ठ्यारोमा सहयोग गरेका विदेशी साथी र अमेरिकन परिवारलाई सुदिपले बिर्सेका छैनन् । ‘अमेरिका जाँदा भेटघाट हुन्छ । अहिले त मलाई सहयोग गर्ने अमेरिकन बुढाबुढी भएका छन्,’ उनले सम्झिए ।
‘नेपाल फर्कन सबैलाई मन हुन्छ । योजना पनि बनाउँछन् तर मेरा कतिपय साथीहरुले भन्ने गर्दछन्, नेपाल जान बित्तिकै के गर्ने भन्ने सोचाई धेरैको हुन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । त्यही भएर युवामै र्फकन जरुरी छ ।’ नेपाल अर्केर के गर्ने भन्ने अन्योलकै बिचबाट अमेरिका बस्ने धेरै जनशक्ति छ । अमेरिका बसेर हेर्दा त्यो ठिकै हो । तर, नेपाल आएपछि काम गर्ने बाटाहरु आफै खुल्छन् । सुरुको समयमा केही गाह्रो हुन्छ ।
हरेक काम सुरु गर्दा हुने अप्ठ्यारो जहाँ गएपनि हुन्छ । विदेशमा सिकेको सीप देशमा लगाउँ । आउनुहोस्, देशमा सँगै मिलेर गरौँ । देश बनाउने तपाई हामीले नै हो ।’
(सुदिप आचार्य, डिस होमका कार्यकारी निर्देशक तथा युवा व्यावसायी हुन )खसोखास अनलाइनबाट ।